Spice Old Spins ayaa dhiirrigeliya: Markaad Shaki ku jirto, Go'aan la'aan | Martech Zone
Arbaco, Juun 14, 2010 Sabtida, Oktoobar 18, 2014 Douglas Karr
Mararka qaarkood waan jeclahay suuqgeynta iyo sameynta istiraatiijiyado muddo-dheer ah oo beddelaya aragtida ganacsiga, kordhiya soo-dhoweynta astaanta, kicinta iibka iyo sare u qaadista guusha shirkadda. Maanta iyaga ka mid maaha.
Dunida suuqgeynta internetka ayaa ololaya cajiib ah istaraatijiyad ka mid ah Old Spice nin.
Haddii aad ka mid tahay dhowr ka mid ah kuwa aan maqlin, Old Spice guy wuxuu ku adag yahay shaqada isagoo ka jawaabaya Tweets iyada oo loo marayo kanaalka Youtube shakhsi ahaan. Wuxuu ugu jawaabayaa dadka raacaya baaxada weyn ilaa iyo inta kayar kuwa yar (laakiin inta badan waa kuwa waaweyn ee raacsan).
Runtii ma waxaan nahay gacmo-gaab iyo carrab la '? Ku tuur nin muuqaal qurxoon oo codkiisu aad u sarreeyo shukumaan oo sii xoogaa soo noqnoqod leh oo adduunku wuxuu u arkaa caqli saafi ah. Kani ma asalbaa? Tani ma ahan wax fudud Tag Daddy ololaha ololaha dib loo ikhtiraacay? Runtii ma tahay in cajiib ah?
Fiidnimo Galmada iyo Magaalada? Raha ku jira ganacsiga Beer? Tag Aabe Boobs? Oday Spice ah? Waxaa laga yaabaa inaan dhamaanteen iska dayno isku dayga inaan noqono caqli badan oo caqli yar oo aan wax yar hoos u dhigno.
PS: Anigu waxaan ahay gacmo-gaab iyo carrab la '. Waan jeclahay xayaysiisyadan waxaanan ahay labawejiile munaafaq ah. Si kastaba ha noqotee, waxaan ku taagnaan doonaa xaqiiqda ah inaanan urin udgoonkii Old Spice tan iyo markii aan arkay Aabahay oo u helay inay tahay shey kayd ah 70-maadkii. Uma maleynayo inuu waligiis isticmaalay. Waxaa is weydiin mudan, “Miyuu ololahan dhab ahaantii iibinayaa waxyaabo badan oo Old Spice ah?"
Tags: commercialsuunsigii horeolole dhir udgoonwarbaahinta bulshada
Jul 15, 2010 markay ahayd 7:52 AM
Waan jeclahay ololahan! Miyaad raaceysay gadaal-iyo-gadaal udhaxeysa Old Spice Guy iyo Alyssa Milano? Alyssa ayaa xitaa duubtay jawaabteeda fiidiyow iyada u gaar ah oo ay weydiineyso Old Spice Guy inay u dirto $ 100k sanduuqa gargaarka ee saliida daadanaya ka dib markii uu u soo diray darsin ubax ah.
Jawaabteedu waa http://www.alyssa.com/
Jul 15, 2010 markay ahayd 8:14 AM
Waxaan gebi ahaanba qirayaa inaan jeclahay, sidoo kale, Patric. Taasi waa ujeedkeyga, in kastoo. Miyay tahay inaan ka tagno dhammaan bartilmaameedkeenna casriga ah iyo ololeyaasha qulqulaya oo aan si fudud u qorno xariiqyo qosol leh oo aan u helno qof inuu muujiyo maqaarka si uu u sameeyo suuqgeynteena?
Jul 15, 2010 markay ahayd 8:20 AM
Hagaag anigu waxaan ahay nin sidaa darteed sida muuqata maqaarka cunsurigiisa waxba iima tarayo. Taabadalkeed, waa hadalka wadajirka ah ee ay isaga siiyaan iyo sida uu ugu hadlo taas ayaa iga dhigaysa wax qosol leh. Hadda marwooyinka dhinaca kale waxay yeelan karaan fikrad ka duwan.
Marka uma maleynayo inay tani ku saabsan tahay maqaarka. Waxay ku saabsan tahay xariifnimo. Waxaan u maleynayaa in fiidiyowga Toyota "Swagger Wagon" uu yahay mid ka mid ah fiidiyowyada ugu hal abuurka badan uguna qosolka badan (ganacsi?) Weligey ma arag. Iyo haa, waxay iga dhigeysaa inaan doonayo inaan iibsado Toyota Sienna.
Sida GoDaddy, dabcan maqaarka rafcaanka ayaa waxtar leh. Laakiin si daacad ah, waxaan ka iibsaday GoDaddy ka hor inta aysan xayeysiisyadaasi soo bixin mana aanan iibsan wax intaas ka badan xayeysiisyada awgood. Haddii berrito HostGator uu bilaabay inuu muujiyo xayeysiis "maqaarka" wax walba ayaan ugu wareejin lahaa iyaga xayeysiiska dartiis. Mana iibsan doono domainkeyga soo socda iyaga.
Jul 15, 2010 markay ahayd 8:21 AM
Crud, jumlada ugu dambeysa ee HostGator waa inay noqotaa "Aniga * ma * badalayo wax walba iyaga to"
Jul 15, 2010 markay ahayd 8:32 AM
“Taasi waa ujeedkeyga, in kastoo. Miyay tahay inaan ka tagno dhamaan bartilmaameedkeena casriga ah iyo ololeyaasheena qun yar oo aan si fudud u qoro xariiqyo qosol leh oo aan u helno qof inuu muujiyo maqaarka si uu u sameeyo suuqgeena? - Doug, dambi ma leh laakiin waad ka fog tahay saldhigga tan. Old Spice waxay dib ugu soo celineysaa magacooda dhagaystayaal da 'yar oo leh suuq geyn hal abuur leh. Waxay adeegsanayaan warbaahinno badan, daabacaad, telefishan, qadka (YouTube), iyo warbaahinta bulshada si ay u gaaraan bartilmaameedyadooda bartilmaameed. Sidee, suuq ahaan ahaan, u dhihi kartaa tani ugu yaraan ma ahan bilow wanaagsan olole aad u wanaagsan? Sababtoo ah inaysan lahayn olole faleebo micnaheedu maahan inay tahay suuq xumo.
Jul 15, 2010 markay ahayd 10:10 AM
Waxaan u maleynayaa 'tani ma iibin doontaa waxyaabo badan oo Old Spice ah' waa su'aal dad badani ay ka baqayaan inay ka jawaabaan hadda 🙂
Waxaan qabaa inay sidaas noqon doonto. Tani dhammaantood waa u wanaagsan tahay astaanta. Waxaan u maleynayaa in qaar badan ay fiirin doonaan Old Spice sababtoo ah waxaan ka fikireynay arintaan labadii maalmood ee la soo dhaafay oo toos ah… gaar ahaan haddii ay isticmaalayaan dharka jirka ee udgoonka gabadha.
Si kastaba ha noqotee, calaamaddu wax ma ii qabanaysaa aniga oo aan ku xiro shucuur ahaan? Ma dhisaysaa daacadnimo? Marka laga reebo ka qayb qaadashada, run ahaantii maahan. Waxaan u maleynayaa in ololahan uu yahay hal qeyb oo ka mid ah waxa weli ka imaan doona waxa aan si rasmi ah ugu yeernay xayeysiinta.
Jul 15, 2010 markay ahayd 10:12 AM
Douglass, ololaha waa hubaal mid qosol badan. Waxay u heli kartaa dadka inay ka hadlaan astaanta. Kaas oo calaamadeysan oo loo maleynayo inuu yahay wax aabbahaa ama awoowahaaga u adeegsaday oo keliya, waa tallaabada ugu horreysa ee aad dadka uga dhigayso inay mar kale isku dayaan. Old Spice wax badan baa iska badalay tan iyo markii uu kaliya xiiray kadib. Waxaan u maleynayaa in Old Spice ay u socoto wax badan oo qosol iyo faallooyin xanaaq leh Ala Guy ugu Xiisaha Badan Dunida, in ka badan wax kale sida Ax.
Kuma aqbali karo adiga isbarbardhiga GoDaddy. Sida iska cad, GoDaddy wuxuu bartilmaameedsanayaa Ragga xayeysiintaas. Haddii Old Spice ay isticmaali lahayd Racfaanka Jinsiga si ay u iibiso, waxay lahaan lahaayeen gabdhaha GoDaddy inay ku dhacaan isaga oo dhan, oo la mid ah Ax.
Waan ku raacsanahay dhibco badan oo Patric sameynayo, iyo "Swagga Wagon" waa ganacsi weyn, xayaysiisyada Daanyeerka Jirkuna waa cabsi sidoo kale. Waxaan u maleynayaa in Qosolku sii dheeraado oo la xasuusto
Jul 15, 2010 markay ahayd 10:13 AM
Kaliya waa inaan dhaho waxaan kaloo jeclahay ololahan. Waa madadaalo dadkuna waxay rabaan inay ka qayb galaan. Maxaa kale oo ay weydiisan lahaayeen.
Hadda, sida su'aashaada ku saabsan haddii ay dhab ahaantii iibineyso Old Spice, taasi waa mid laga doodi karo. Waxaan u maleynayaa in dadka intiisa badani ay isla fikir kaa yihiin oo ah "taasi waa tii aabbahay u adeegsaday 70-maadkii" laakiin waxaan u malaynayaa in ololuhu isku dayayo inuu beddelo sawirkaas. Waxay isku dayeysaa inay dadka da'da yar u tixgeliso inay tahay astaan ​​madadaalo halkii ay ka heli lahayd aabbahay.
Xaqiiqdii waan ogaaday qof ku jira boggeyga twitter-ka ee saaka sheegaya in ka dib markii aan daawaday camaign-ka ay u furan yihiin astaanta sidii hore. Ma waxay ka dhigan tahay inay iibsanayaan? Waxaa laga yaabaa in. Taasi waxay u soo degi doontaa sida ay u jecel yihiin urtiisa, laakiin waxaan u maleynayaa inay leedahay dad aad u tiro badan oo ugu yaraan fiirinaya uunsigii hore ee dukaan dawada ku jiray intii hore.
Sheldon, maareeyaha bulshada ee Sysomos
Hadda waxaan fuushan ahay faras!
Jul 15, 2010 markay ahayd 10:32 AM
Haddii aadan akhriyin sida xayeysiisyadan loogu soo saaray warbaahinta bulshada loona soo saaray waqtiga dhabta ah, waa akhris aad u xiiso badan: http://www.readwriteweb.com/archives/how_old_spice_won_the_internet.php?
Fiidiyowyada tayada TV-ga waxaa lagu soo saaray duulimaad celcelis ahaan midkiiba 7 daqiiqo.
Jul 15, 2010 markay ahayd 10:39 AM
Haa, waxaan ahay carrab la 'oo aan u maleynayaa in Old Spice uu yahay mid qabow oo ay shaqeyneyso. Iyadoo la tixgelinayo in dadka badankood ay wali qoolley-godkii Old Spice-ka u yihiin astaantii Ninka Hore - waxay su'aal gelineysaa su'aasha - Ma jiraa mid ka mid ah kuwa caanka ah ee xayeysiinta, xayeysiinta, iyo xayeysiinta daabacan shaqeynaya? Waxaan damaanad qaadayaa inay aad uga qaalisan yihiin dadaalkii Old Spice YouTube.
Jul 15, 2010 markay ahayd 10:47 AM
Waan kula socdaa, waxaan moodayay inay ahayd madadaalo, soo jiidasho iyo sifiican loo qabtay, laakiin waxaan runtii jeclaan lahaa inaan arko saameynta iibka ka hor intaanan dhamaan ku dhawaaqin guul baraha bulshada re
(Waxaan ku qortay halkan: http://bit.ly/9SiQ3L)
Jul 15, 2010 markay ahayd 10:51 AM
Saaxiibaday ayaa guriga timid xalay waxayna ii sheegtay inay soo qaadatay Old Spice oo udgoontay markii ugu horeysay abid shalayto fiidiyowyadaas darteed. Waxay noqotay inay jeceshahay, waxayna rabtaa inaan isku dayo.
Waa cabir muunad ah oo mid ah, sida la oggol yahay, laakiin muunaddaas gudaheeda ah way shaqeynaysaa. 🙂
Jul 15, 2010 markay ahayd 10:57 AM
Xaqiiqdii waxay ku guuleysteen waxa ugu caansan ee jeclaan lahaa in maalmahan la helo (olole dhiirrigeliya oo faafiyo macmiilka), iyo Old Spice ayaa ugu dambeyntii noqotay 'qabow' markale. (Um… weligeed ma qabowday? Waxaan u maleynayaa inaan aad u da 'yarahay aadna u aqaano waxyaabo badan oo ku saabsan Old Spice ..)
Aniga ahaan, xayeysiinta noocan ah daruuri kama dhigeyso inaad 'aaminto' astaanta, sida kiiska GoDaddy (websaydhada martigalinaysa inay tahay wax ubaahan heer kalsooni - caraf nin; ma badna) laakiin haddaan arkay Old Spice on shelf farmashiyaha, waxaan u maleynayaa inaan hadda siin lahaa ur, si aan u arko waxa uu dhab ahaan u urayo 🙂 Waxaan ku hawlan yahay astaanta, waxaan xiiseynayaa astaanta… in dhammaan wax lagu tiriyo wax, sax?
Doqon waa fiican tahay. Doqon waa loo dhowaan karaa; caadiga ah. Doqon waa baxsi. Laakiin ma wici kartid doqonkan. Waa xariifnimo, waana jinsi. Isku dhaf aan macquul aheyn in la iska caabiyo. 😉
Way fiicantahay in la maqlo aragti ka soo horjeedda halkii, laakiin ololahan ayaa ah mid aad uga duwan tan GoDaddy Super Bowl ads. Maaha isbarbardhig cadaalad ah IMO. Tufaax maaha tufaax, waa tufaax ribeye.
Waxa kaliya ee la mid ah ololaha GoDaddy waa qaybta "muujinta maqaarka".
Waan ku raacsanahay in maqaarka maqaarkiisa dartiis uu yahay mid aan caqli gal ahayn oo carrab la 'haddii ay intaas oo dhan ahayd laakiin kiiskan waxaa loo isticmaalaa qaab is waafajin ah oo loogu talagalay olole soo jiidasho leh.
Cadayn? Uma maleynayo in gabdho badani ay la wadaageen xayeysiisyada aan loo bogin ee GoDaddy saaxiibadood iyo shabakadaha. Haddii kale, BADAN ragga ayaa wadaagay oo sii wadaya wadaagista xayeysiiska Old Spice, in kasta oo uu haysto nin aan shaati lahayn oo ah cunsurka muuqaalka koowaad. Xaqiiqada ah inay diyaar u yihiin inay sidaa sameeyaan waxay muujineysaa in “maqaarku” uusan ahayn sababta ay wax u wadaagayaan.
Xayeysiisyada GoDaddy waxay ahaayeen dhaqan hal qaab oo xayeysiin ah, sax? Ma jirin wax shaqsiyeyn ah iyo qaab aan aniga "si toos ah" ula fal galo Danica Patrick. Isla tusaalooyinkaaga kale. Xitaa haddii ninka Old Spice uusan u jawaabin qof gaar ah oo su'aal weydiya, rajadaas inuu ka jawaabi doono iyo xaqiiqda ah inuu ka jawaabo wax badan ayaa ka soocaya GoDaddy, Twilight, Sex iyo City iyo rahyada ku jira xayeysiinta biirka .
Waa hawlgelinta iyo shakhsiyeynta kan ka dhigeysa tan mid ka duwan. Suuqge caqli badan ayaa mar ii sheegay in dhammaan suuqgeynta iimaylku ay ahaato 1) la filayo 2) shaqsi iyo 3) khuseeya. Shirkadaha badankood xitaa kuma sameyn karaan emaylka iyo Old Spice waxay ku guuleysteen inay ku sameeyaan olole xayeysiis ah.
Jul 15, 2010 markay ahayd 10:58 AM
Toddobaadkii la soo dhaafay ka hor, ma aaminsani in aan ku dhawaaqay erayga 'Old Spice' haddii aan si kaftan ah ula jeedo urta nin duq ah mooyee. Si kastaba ha noqotee, aniguba waan cabay ololihii warbaahinta bulshada ee 'Old Spice' Kool-Aid. Waan jeclahay Waa mashquul. Waxay iga dhigeysaa inaan doonayo inaan ku ordo Twitter oo aan la yimaado wax runtii khiyaano ah anigoo rajeynaya in Old Spice Guy uu fiidiyoow aniga uun sameyn doono. Wax shaqo ah kuma lahan racfaankiisa jinsiyeed? Maya. Waa fekerka daqiiqad caan ah (haa, anigu waa gacmeed yar), hawl qabasho runtii qabow leh summad (ha iibsado ama ha iibsadee) iyo wax runtii xiiso u leh la wadaagidda asxaabta Dhammaan xiisahaas malagu beddelay iib aniga? Maya Laakiin waxaan kuu sheegayaa marka xigta ee aan shelf la joogo, inaan ka soo baxayo dusha sare ee mid ka mid ah baakadaha ay wataan wiilasha xun oo aan ku qaadan doono karbaash. Waxaa jira hal caqabad oo aad u muhiim ah oo udhaxeysa olole weyn iyo aniga oo lacag ku duqeynaya farmashiyaha. Taasi waa sheyga. Haddii aysan ur wanaagsanayn, si fiican u shaqee oo qiimo u yeelo lacag ma sameynayo macaamil ganacsi. Waxay ku fiicantahay Old Spice inay igu kaliftay inaan calaamaddooda u qoro tixgelinta.
Jul 15, 2010 markay ahayd 11:00 AM
- Ogaansho: Hubi
- Wadahadal: Hubso
Tani waa illaa iyo inta ololeyaasha xayeysiinta badankood ay awoodaan inay socdaan, si kastaba ha ahaatee aniga aniga tani way iga sii fogaatay:
- Tixgelin (ku arag armaajo on iyo OGAYSIIS, ka fikir waxa ku saabsan): Hubi
- Hal Iibsi: Hubsiimo
Waan arki karaa gf-ga (haddii ay joogi lahayd Kanada) oo istaagaya, urinaysa oo doonaya inaan isku dayo aniga sababahan awgood. Kaliya waxay kicin kartaa hal iibsi 1/20 ee daawadayaasha, laakiin waqtigaas waa shaqada sheyga si loo wado iibsiyada soo noqnoqda.
Waa guul buugyadayda, taas oo runtii ah nooc ay adag tahay in la sheego maxaa yeelay waa gacmo-gaab. Si xarrago leh ayaa loo fuliyay, qosol badan oo qosol badan, oo si sixir ah loogu dhex daray baraha bulshada laakiin wali qoto dheer. Waana jeclahay.
Jul 15, 2010 markay ahayd 11:11 AM
Fikradda xayeysiisyadan ayaa ah:
1. Kordhinta wacyiga. La dhammeeyay
2. Wadahadal bilow. La dhammeeyay
3. Dadku ha ogaadaan inay udgoon yihiin Old Spice khaanadaha. La dhammeeyey (akhri faallooyinka aniga dusha iga saaran).
4. Dadku ha ka iibsadaan badeecada. Mar labaad, waa la qabtay. Xaqiiqdii lambarradu weli way soo socdaan laakiin mar hore ayaan ogaaday in saaxiibbaday ay isku dayayaan in kasta oo aabbahood u adeegsan jiray sidii hore maalintii.
LAAKIIN ma aanan gaadhin inaan ugu yeedho sheeko guul warbaahinta bulshada ah weli. Ma guul baa laga gaadhay kor u qaadista wacyiga sumadda? Hellz haa. Xaqiiqdii, waxaan heystaa wadatashiyo ku saabsan cidda ku guuleysan doonta dagaal u dhexeeya nin Old Spice ah iyo nin Dos Equis ah (haddii loo maleeyo in Chuck Norris uusan jirin maxaa yeelay dhammaanteen waan ognahay inuu guuleysan doono) LAAKIIN illaa aan ka arko lambarrada iibka waxsoosaarka illaa iyo hadda waxaa loo isticmaalay oo keliya olole wacyi gelin ah. :) Su'aashu waxay tahay ma lagu jeclaan karaa laakiin sidoo kale u wareejin kartaa badeecada?
Waad jeclaan kartaa ninka Dos Equis, laakiin ma jeceshahay biirka Dos Equis? Miyaad iibsatay hal mar ka dib ganacsiyada ugu horreeya? Miyaad sii waday inaad iibsato ka dib? Haddii uu jiro kala-goyn u dhexeeya calaamadda iyo badeecada waxaad kaliya helaysaa wax iibsi hal mar ah oo aan ahayn himilada ugu dambeysa. Waxaad dooneysaa inaad abuurto daacadnimo sumcadeed - iyadoo aan loo eegin sida halku-dhiggu u yahay (hal-ku-dhigyada).
Miyaad u maleyneysaa inaan ka baxsan yahay?
I soo wac laakiin waa layga digayaa: anigu waxaan ahay gacaliye ma ahi halgamaa laakiin sidoo kale waxaan ahay halgamaa ee wax fikrad ah ha helin.
Hada fiiri naagtaada, hada i fiiri. Waxaan saarnaa faras.
Jul 15, 2010 markay ahayd 11:14 AM
Habeenkii kale aniga oo socod ku maraya dariiqyada dukaanka raashinka ayaan ka hor imaaday Baaskii Hore. Hadaan sifiican u helin alaabta musqusha waxaan iibsan lahaa si aan isku dayo. Ololaha ayaa dhab ahaantii ku riixaya maskaxda sare iyo caddaynta sheeko xariifka ah waxay muujineysaa inay sameyneyso iib ama labo.
Waxa aan ku jeclahay ololaha ayaa ah inay fahanto dabeecadda foosha xun ee dhaqanka internetka. Kooxda kaliya ma ahan fulinta, ee way dhageysanayeen wayna u jawaabayeen. Xodxodashada Alyssa Milano, waxay xaq u leedahay inay ubax u dirto gurigeeda. Gudbinta soo jeedinta guurka. Jawaabta tooska ah ee loogu talagalay qof aan lahayn taageerayaal weyn oo ku jeesjeesaya in Old Spice Man uu kaliya la hadlo dadka caanka ah. Bixinta boodhadhka dhawaaqa si bulshada casriyeynta u abuuri karto http://oldspicevoicemail.com
Kani ma farshaxan sare baa? Maya Laakiin markaa, saabuun iibinta weligeed ma tahay farshaxan sare?
Xaqiiqdii waxaan xiiseynayaa barashada natiijooyinka noocee ah P&G ay ka arki doonaan ololaha waxaana jeclaan lahaa inaan barto sida isbadalkan udambeeyay ee ololahan loo barbardhigayo xayeysiinta bilowga weyn, labadaba dhanka dareenka iyo iibka.
Smile dhoola cadee hal__
Bandhigga Dunida Blog
Jul 15, 2010 markay ahayd 11:18 AM
Waad ogtahay sida aad ku ogtahay tani inay tahay olole weyn oo lagu guuleysto?
Falcelinta la helay darteed. Xaqiiqdii waad ku saxan tahay falanqayntaada laakiin dhamaadka maalinta xayeysiintu waa sida farshaxanka oo kale. Haddii dadku ka fikiraan wanaagiisa, markaa wanaagiisa iyadoon loo eegin qoto-dheer, taakulayn, xishood, jabsasho, daal, curyaannimo, wax kasta. Qosolku waa qosol, wanaag waa fiicanyahay natiijooyinkuna waa kuwa muhiim ah.
Dad badan oo hoos ku qoran ayaa horeyba u markhaati furay in dadku mar horeba tixgelinayaan, isku dayayaan oo iibsanayaan wax soo saar aan cid kayar 60 sano iibsanayn muddo 20 sano ah.
Raggaani waxay dhiirrigeliyeen qaar ka mid ah kuwa ugu khibrada badan ugana liita saamaynta warbaahinta bulshada inay ku boodaan oo ay kor u qaadaan ololahooda oo ay siiyaan sumcad dhab ah. Wax magac aad u yar waligiis sameeya.
Taasi waa guri socod!
Jul 15, 2010 markay ahayd 11:22 AM
Waan ogahay inaan hadda isticmaalo badeecooyin udgoon oo udgoon iyo inaan bilaabay inaan iibsado ilaa waqtigii caanku ahaa 'Waxaan ku socdaa faraska'. Taasi miyay ku mahadsan tahay xayeysiiska? Ma hubo.
Haddii aan ku cabiri karno ganacsi cusub ololahan ama aniga aniga, ma aha natiijada ugu muhiimsan. Waxaan u maleynayaa in, sida Jeremy Wright uu ku muujinayo faallooyinkiisa, in wada hadalada loo tixgeliyo halbeeg u qalma maxaa yeelay wada hadalada wanaagsan waxay qeexayaan waaya-aragnimada astaanta iyo sida ay ula socoto dadweynaha. Warbaahinta Bulshadu waa dariiq wanaagsan oo loogu oggolaanayo sumadda inay saameyn ku yeeshaan macaamiisha, taas oo u oggolaanaysa inay si aad ah ula macaamisho iibsadaha. Waxaan dareemayaa in Old Spice ay ku turunturoodeen dareen la mid ah halka ay macaamiisha ka dareemayaan 'qayb ka mid ah kooxda' si ay ula hadlaan.
Jul 15, 2010 markay ahayd 11:29 AM
Ku raacsanaanta Clay hoosta… GoDaddy wuu ku guuldareystay maxaa yeelay waxay bixisaa WAXBA meel fog oo madadaalo ah, sans boobs, iyo wuu ogyahay waxa… muujinta boogaha ee 2010 ay waxtar u leedahay sida Hollywood 'Blockbuster' oo leh 'saameyn gaar ah' wanaagsan laakiin sheeko ma leh… Jurassic Park ayaa jabisay caaryada (oo lahaa sheeko ku filan oo soo jiidasho leh maalinta) carry laakiin miyaad xusuusataa, oh ma ogi dib u sameynta 'Godzilla' movie filimka Matthew Broderick hubaal wuxuu rabaa inuusan waligiis, weligiis, weligiis xitaa maqlin… ceeb Matthew.
Xayeysiisyada GoDaddy = dib u soo celinta xun ee Godzilla… Old Spice = filimka cusub ee bilowga ah (kaliya sharadka waa adag tahay, ma arag)… laakiin isku dhafan muuqaal muuqaal leh iyo sheeko la yaab leh oo lagu qabanayo dhagaystayaasha aka madadaalada.
Xaaladdan oo kale, xayeysiisyada Old Spice-ka waxay ahaayeen kuwo aad u qosol badan, habka iyo habka ay ula xiriiraan shaqsiyaadka runtiina 'aad bay u fiicnaayeen'… waxay ahayd mid wanaagsan, muddadaas.
Jul 15, 2010 markay tahay 12:17 PM
Waan ka xumahay Chris! Uma maleynayo @GuyKawasaki iyo @AlyssaMilano inaysan ahayn dhagaystayaal 'da' yar '. Sidoo kale, warbaahinta bulshada maahan dhagaystayaal 'da' yar '. Isbeddellada ayaa muujinaya in bartamihii 30s iyo ka weyn ay leeyihiin heerka korsashada ugu dhaqsaha badan ee warbaahinta bulshada. Tani waxay ahayd ciyaar nadiif ah oo fayras ah… farta loogu fiiqay dadka khadka tooska ah kula hadla dhagaystayaal waaweyn, soo jiidanaya dareenkooda (iyo EGO-ga) oo sameeya wax ka dhigaya inay ka hadlaan Old Spice.
Ma dhihin waxay ahayd suuqgeyn xun, kaliya waxaan layaabanahay hadii ay suuq geyn runti shaqeyn doonto.
Jul 15, 2010 markay tahay 12:31 PM
Ummm… Waxaan xiraa uunsigii hore. Ma aanan ogeyn inaan been abuur ahayn.
Jul 15, 2010 markay tahay 12:33 PM
Falanqayntaadii ku saabsanayd Old Spice stunt = BEEN.
Fiidiyowyada Old Spice-ka waxay ahaayeen kuwo qurux badan oo aan ahayn shaashadda shaashadda, laakiin bc wuxuu sheegayo waa wax laga naxo. Waxaan hubaa inay tahay laba shay: (a) Wuu nala hadlayaa iyo (b) wuxuu sheegayo waa xariif. Xaddiga aqoonta baahsan ee ay u keeneen jawaabahooda yar yar ayaa isugu jira kuwo kooban oo wax ku ool ah. Waxay si dhab ah u garanayeen waxa la yiraahdo, iyo waqtiga iyo waqtiga jawaabahaas waa waxa aan ku qanacsanahay. Waxaan sidaa ula qabsanay bini aadamnimada, khibrad aan la aqoon inta aan webka dhex mushaaxeyno, in isku day kasta oo aan dib ulala hadlayno Joe Everyman (yacni jabinta kalidii) waxaa lagu soo dhaweynayaa gacmo furan. Maxay dad caan ah oo flash ahi ay caan u yihiin hadda? Sabab la mid ah awgood (laakiin laxiriira khibradayada anteenada gudaheeda). Waa wax yar oo laga filayo internetka maadaama ay ku dhowdahay dabeecadda labaad inuu lumo dagaalka. Old Spice waxay samaysay suurtagalnimada in lala hadlo si aan caadi ahayn oo muuqata, haddii aan kaqeyb qaadanana, waxaan dooneynay in lagu daro Joe Everyman Sidaas haa.
Jul 15, 2010 markay tahay 12:53 PM
Ma fuushan tahay faras?
Jul 15, 2010 markay tahay 12:59 PM
Waxaan isticmaalaa waxyaabaha lagu maydho Old Spice. Ma jiro wax carfaya ama wax kale. Alaabadooda qubeyska runtii waa wanaagsan yihiin. Waxaan u arkaa mid qosol badan markii xayeysiisyadan ay goobta ka bilaabeen.
Jul 15, 2010 markay tahay 1:01 PM
Way kayar yihiin aabahay, markaa haa dhagaystayaal da 'yar! 🙂 Waxay haysteen baro TV-ga ah oo is rogaya ka hor inta aan la gaarin warbaahinta bulshada… weli waa dadaal suuqyo badan oo suuq-geyn ah oo u muuqda inuu qeyb ka yahay olole ballaaran. Caddayntu had iyo jeer waxay ku jirtaa # 'sidaas darteed waa inaan sugnaa oo aan aragnaa inay shaqaysay iyo in kale. Waqtigan xaadirka ah waxay umuuqataa inay shaqeyneyso… waxay kaa heshay inaad wax ka qorto… iyo inaad ogtahay inaad adigu tahay qof suuq yaqaan caqli badan, waxaan qiyaasayaa inaad ogtahay in qoraalkan uu faaqidi doono doodo badan isla markaana isku xiri doono casiir sidoo kale 🙂
Jul 15, 2010 markay tahay 1:05 PM
Nick, aniga sidoo kale waan ahay.Laakiin weli uma muuqan ninka xayeysiimahaan sameeya!
Jul 15, 2010 markay tahay 1:21 PM
Dakhliga wadista ma yahay qodobka qeexaya in ololahani uu yahay guul baraha bulshada iyo in kale? Waxaa laga yaabaa inaan weydiisto inaan kala duwanaado maxaa yeelay waxay ila muuqan doontaa in 26 faallooyin ku saabsan maqaalkaaga oo keliya, aan la tirin karin (malaayiin laga yaabo) tweets iyo isdhexgalka kale ee warbaahinta bulshada dhammaantood waxay tilmaamayaan sheekada guusha suuqgeynta warbaahinta bulshada.
Xitaa haddii aysan jirin koror toos ah oo iibka ah way adag tahay in la yiraahdo kororka wacyiga sumadda iyo hor-u-marinta suuqa cusub qiime ma lahan oo waxay siisaa barxad dadaallada soo socda.
Jul 15, 2010 markay tahay 1:24 PM
'Iibsashada qaar' ama xitaa koror ku yimid iibsiyada wali lagama yaabo inay lahaadaan Soo Celinta Maalgashiga ee loo baahan yahay si loogu muujiyo guusha ololaha sidan oo kale ah.
Jul 15, 2010 markay tahay 1:25 PM
Waxaan kuxiran lahaa iibinta inbadan oo ah Old Spice - maxaa yeelay waxay abuureysaa wacyigelin marka xigta ee aad dukaanka kujirto waxaad ogaan doontaa Old Spice-ka maanta ma ahan kii udgoonaa ee Old Spice aabayaashaadu xirnaayeen 1970's. Waxay si balaaran u balaariyeen qadkooda qaar kamid ah waxyaabaha cusub gabi ahaanba waa wax cajiib ah.
Jul 15, 2010 markay tahay 1:39 PM
Laakiin xitaa summad ama wacyigelin 'himilada ugu dambeysa waa iib.
Jul 15, 2010 markay tahay 1:42 PM
Annaga raggii hore ee in muddo ah soo jiray waxay arkeen ololeyaal badan oo sidan oo kale ah oo yimaada oo taga. Waxaan aragnay qof walba oo ka qeylinaya saqafka sare ololeyaal aad u wanaagsan, kaliya si aan u aragno sicirka saamiyada iyo iibka oo sii dhacaya goor dambe. Taasi waa sababta aan u dhaliilayo ololahan. Aniga shaqsiyan waan jeclahay waana layaabay inta buuq ee aan maqlo… laakiin waxaan la yaabanahay hadii saameynta mustaqbalka fog ay halkaas jiri doonto.
Jul 15, 2010 markay tahay 1:43 PM
Waxaa lagu heshiiyay dhammaan qodobada… marka laga reebo su'aasha ama boos celinta ee ku saabsan in ololahan uu yahay mid guuleystay iyo in kale.
Slam dunk, shirkad kasta, waa inay lahaataa suuq-geyn cajiib ah IYO alaabooyin la yaab leh. Shaki iigama jiro in ololahani dadka ku soo jiidan doono inay wax iibsadaan… laakiin haddii alaabtu “urayaan” (pun loogu talagalay 😛), markaa ma eedeyn kartid suuqgeynta.
Si kale haddii loo dhigo, waxaan rumeysanahay in ujeeddada ololuhu - ee Old Spice ama Dos Equis - ay tahay 'Isku day alaabtayda' 'maaha' U noqo qof u doodo noloshaada oo dhan alaabtayda '. Marka la eego, ololahan Old Spice-ka waa WILDLY guul!
Jul 15, 2010 markay tahay 2:28 PM
Run laakiin taasi miyay ahayd himilada dadaalkan gaarka ah? Waxay si cad isku dayayaan wax cusub, iyagoo isku dayaya inay dib u soo nooleeyaan astaanta Old Spice-ka oo ay uga dhigaan mid jiil u leh jiilka soo koraya. Ugu dambeyntiina tani waxay horseedi doontaa iibin laakiin ujeeddadaas dadaalkan ayaa ahayd mise ujeedku wuxuu ahaa in ka badan oo ku saabsan wacyigelinta iyo dib-u-calaamadeynta wax soo saarka loo arko inuu yahay badeecad duq ah Hadda waxay heystaan ​​barxad weyn oo ay horay ugu socdaan oo ay ku dhiirrigeliyaan wax soo saarka iyagoo maanka ku haya dakhliga wadista. Taasi miyaanay ahayn guul? Taasi miyaanay wadeyn baraha bulshada?
Jul 16, 2010 markay ahayd 5:09 AM
Hoos u dhig Haa. Haddii kale ma faafi doono. Halkan waa xaalad dhab ah oo adduunka ka jirta. Sababtoo ah Old Spice waxay bilaabeen ololahooda fayraska si ay u kiciyaan doodaha aan xayeysiinta ahayn sida tan, dhowr rag ah oo aan ogahay inay halkan ku sugan yihiin iyagoo ku mashquulsan sida ay wax soo saarkoodu u weyn yahay. Hadda waxaan dareemayaa inay igu qasban tahay inaan hubiyo qaybta Old Spice ee shelf marka xigta ee aan aado dukaanka. Waxay kaliya ku guuleysteen macaamiil cusub.
Jul 16, 2010 markay ahayd 5:11 AM
Waan ku raacsanahay Adam, sheekooyinka guusha dhabta ah waxay kujiraan ololeyaasha magacbixinta shirkadaha sida Dominoes iyo Old Spice oo awood u leh inay soo jiitaan taas oo abuureysa buuqa lagama maarmaanka u ah dadka inay ku lug yeeshaan oo qiimeeyaan- markaa waxay rajeynayaan inay beddelaan ra'yigooda si ay u doortaan sheyga. Haa, waxqabadyo badan oo ka socda baraha bulshada ee ganacsiyada waaweyn way adagtahay in lagu cabbiro isbeddelada tooska ah ee dakhliga, laakiin qiimaha dhalinta wada hadal dhab ah oo soo jiidasho leh waa mid aad u weyn.
Jul 16, 2010 markay ahayd 11:58 AM
Hadday sidaa u carrab la 'tahay oo ay fududahay, maxay u sii badin weyday? Dhibcuhu waa kuwo dhalaalaya maxaa yeelay dadku waxay ka hadlayaan Old Spice. Muddada. Dhibic qaylodhaan.
Qodobkaagu waa ansax laakiin aan khusayn. Waa suuq-geyn & way ku fiican tahay carrab la'aanta. BTW, Waxaan u maleynayaa in dib-u-iibinta xayeysiisyada Old Spice ay waxyar ka caqli badan tahay GoDaddy.
Jul 16, 2010 markay tahay 1:54 PM
Muxuu dhadhanka casiirku u eg yahay? 😛
Jul 17, 2010 markay tahay 2:51 PM
Mudanayaal, waxaa kaa maqan qayb suuq muhiim ah campaign Ololahan looma bartilmaameedsanayo ragga… Waxaa lagu bartilmaameedsanayaa dumarka. Waxaan u soo iibinaa alaabada nimankeenna, iyo saaxiibbadayada. Annaguna waan jecel nahay ololaha ..: *
Jul 26, 2010 markay ahayd 9:49 AM
Well… iibku hoos ayuu u dhacay: http://mkt.gs/dz3AJD
Jul 26, 2010 markay ahayd 11:34 AM
Haa, ololahan waxaa lagu iibinayaa waxyaabo badan oo Old Spice ah.
Sida laga soo xigtay shirkadda Neilson Co. Iibka ayaa kor u kacaya 11% muddo ka badan 52 toddobaad, saddexdii bilood ee la soo dhaafayna, iibku wuxuu kor u kacay boqolkiiba 55, bishii la soo dhaafayna, waxay sare u kaceen boqolkiiba 107. http://bit.ly/brandweek-old-spice (Toddobaadkii Luuliyo 25, 2010)
Iibinta Aagga Cas waxay ku dhufteen $ 1.6 milyan muddada afarta toddobaad ah ee dhammaatay Julaay 11, boqolkiiba 49 ayaa ka boodday muddada afarta toddobaad ah ee dhammaatay Febraayo 21, xogta SymphonyIRI ayaa muujineysa. Afarta kale ee Old Spice Body Wash waxay kaloo muujinayaan wiish. Guud ahaan iibka Old Spice Body Wash ayaa kor u kacay boqolkiiba 105 muddadaas
Haddii lambarradan ay sax yihiin, waxay iila muuqataa guul la yaab leh.
Kahor 2010 "Old Spice = Old Old Gross!"
Sannadkii 2010 "Spice Old = Nin Fardo Fuulaya qof walbaa wuxuu ka hadlayaa oo ku wadaagayaa shabakadaha bulshada"